Wararka - Asalka iyo adeegsiga Zeolite
Zeolite waa macdan dabiici ah oo ay soo saarto dambaska foolkaanada oo ku dhaca il biyo alkaline ah iyo cadaadis sanado badan ka hor. Isku -darka cadaadiskaan ayaa sababaZeolite in la sameeyo a 3D qaab-dhismeedka tetrahedral silica-oxygen oo leh qaab malab leh oo leh daloolo. Waxaa waa mid ka mid ah macdanta dhif ah oo leh dabeecad taban oo dabiici ah. Isku -darka qaab -dhismeedka malabka iyo qarashka taban ee saafiga ah ayaa awood u lehZeolite si ay u nuugaan dareeraha iyo xeryahooda labadaba. Kharashka taban waxaa lagu dheelitiraa tibaaxaha sida kalsiyum, magnesium, potassium, iyo sodium, waxaana laga beddeli karaa cations -yadaas.
Qiyaastii 250,000 oo sano ka hor, aagga Rotorua/Taupo, dhaqdhaqaaq xooggan oo foolkaanno ah ayaa soo saaray dambas folkaane. Folkaanahaan waa la maydhay oo lagu daadiyay harooyinka, oo samaynaya lakabyo fadhiisiya ilaa 80 mitir oo qoto dheer. Dhaqdhaqaaqa kuleylka ee ku xiga dhulka ayaa ku qasba biyo kulul (120 darajo) kor u sii maraya dhigaalkan stratigraphic, u beddelaya dhoobada dhagax jilicsan oo leh qaab dhismeed gudaha ah oo la dalbaday, sidaa darteed magaca Zeolite.
Tyeeys ah Zeolite
Waxaa jira qiyaastii 40 kala duwan Zeolite noocyada, iyo muuqaalkoodu wuxuu ku xiran yahay xaaladaha inta lagu jiro habka sameynta. NgakuruZeolites oo ku yaal aagga Taupo folkaanaha ee badhtamaha Waqooyiga Jasiiradda New Zealand inta badan waa mordenite iyo clinoptilolite. Goobta, muddada iyo xoojinta socodka biyaha kulul ee sameynta ayaa go'aamisa heerka isbeddelka kuleylka. Dhigashada meel u dhow dildilaaca kaamerada ayaa gabi ahaanba la beddelaa oo badiyaa waxay leeyihiin xoog farsamo oo xoog leh, halka kuwa ka durugsan badiyaa si liidata loo beddelo oo lagu jebin karo dhoobada ka kooban.
Workmabda'a ing Zeolite
Marka hore, awoodda xayeysiinta ion -ka. Marxaladda ka sii daridda kuleylka, maaddada amorphous -ka ayaa laga maydhaa dhoobada, taasoo ka tagaysa qaab -dhismeedka 3D ee aluminium iyo silica. Sababtoo ah qaabeynta gaarka ah, waxay leeyihiin lacag taban oo aad u sarreysa (awoodda sarrifka cation, badiyaa ka weyn 100meq/100g). Tijaabooyin si wanaagsan loo soo oogay oo ku jira xalka (ama molecules -ka hakinta hawada) ayaa lagu nuugi karaa dahaarka dahabka ah, waxayna kuxirantahay qiimaha pH, feejignaanta cation iyo astaamaha lacag bixinta ayaa la sii deyn karaa goor dambe. Isku -darka qaab -dhismeedka malabka iyo qarashka taban ee saafiga ah ayaa oggolaanayaZeolite si ay u nuugaan dareeraha iyo xeryahooda labadaba. Zeolite waa sida isbuunyo iyo birlab. Dareerayaasha dhuuq oo isdhaafsada xeryahooda birlabka, taasoo ka dhigaysa kuwo ku habboon ujeeddooyin kala duwan, laga bilaabo baabi'inta urta ilaa nadiifinta walxaha sunta ah ee buux -dhaafa, si loo yareeyo nafaqada nitrogen iyo fosfooraska beeraha.
Marka labaad, awoodda nuugista jirka. Zeolite wuxuu leeyahay aag gaar ah oo gudaha iyo dibaddaba (ilaa 145 mitir oo laba jibbaaran/g), kaas oo nuugi kara dareere badan. Markay qalalaan, qaar ka mid ah kuwanZeolite waxay nuugi karaan ilaa 70% miisaankooda iyaga oo ku jira qaab dareere ah. Tusaale ahaan, cawska cayaaraha,Zeolite waxay ka nuugi doontaa nafaqooyinka milma bacriminta lagu daray, si ay u daboosho baahiyaha dhirta mustaqbalka si ay u nuugto biyaha oo ay u kordhiso awoodda haynta biyaha iyada oo aan si xun u saamaynin meesha daloolka iyo daloolka.